२ बर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेर जाँदा कसैको आँखामा नबिझाउने गरि बिदा हुनेछु - टान अध्यक्ष सुबेदी - ParyatanBazar.com
२ बर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेर जाँदा कसैको आँखामा नबिझाउने गरि बिदा हुनेछु – टान अध्यक्ष सुबेदी
पर्यटन बजार२६ भाद्र २०७६, बिहीबार मा प्रकाशित
भदौ २६ ,काठमाडौँ।हालै ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को अध्यक्षमा प्रजातान्त्रिक समूहका खुमबहादुर सुवेदी विजयी भएका छन् ।२०४९ सालमा ट्रेकिङ गाइड हुँदै पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश गरेका सुवेदी युनिक एडभेन्चर इन्टरनेसनल प्रा.लि., ट्रिपल ए होलिडेज् र ट्रिपल ए टान्सपोर्ट्का प्रबन्ध निर्देशक हुन् । प्रस्तुत छ टान का नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुबेदीसंग पर्यटनबजार डट कमले गरेको कुराकानी:
एउटा युवा देखि टान को अध्यक्ष सम्म आइपुग्दा के कस्ता सङ्घर्ष गर्नु भयो ?
मैले २०४७ सालमा धादिङ जिल्लाको साविक चैनपुर गाविसमा रहेको सालबास माविबाट एसएलसी पास गरिसके पछि अबसरको खोजीमा सहर पसे । डेरा भाडामा लिएर कामको खोजिमा लागे । पढाई र कामलाई संगै बढाउने उद्देश्यले काम खोजी गर्दै जाँदा राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रमा काम गर्ने अबसर मिल्यो ।
काठमाडौँ आए पछि कति दिन , कति रात भोक भोकै भौतारिएको मानसपटलमा आज पनि ताजै छ । २ वर्ष त्यस कम्प्युटर केन्द्रमा काम गरि सके पछि २०४९ सालबाट म एका एक पर्यटन क्षेत्र तर्फ होमीए । सुरु सुरुमा निकै गाह्रो भयो तर बिस्तारै सबै कुरा मिल्दै मिल्दै गयो । अहिले जस्तो संचारको पहुँच नभएकाले त्यस बेला हिमाली क्षेत्रको पद यात्रामा निकै कठिन थियो ।विदेशी पर्यटकलाई गाईडको रुपमा घुमाउन लिएर हिड्दाँ हिड्दै ८ वर्ष पछि गाईडबाट मालिक बन्न सफल भएँ । सन् १९९८ मा आफ्नै कार्यलय युनिक एडभेन्चर इन्टरनेसनल प्रालि को सुरुवात गरें ।
टानको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा आज म निर्वाचित भएको छु , यस अघि मैले टानको पूर्व कोषाध्यक्ष र बरिष्ठ उपाध्यक्षको पदमा रहेर समेत काम गर्ने मौका पाए । यस अवधि मा मैले ‘पदयात्राका पाइलाहरु’ र ‘बेल्जियमका क्षणहरु’ नामक दुई कृति प्रकाशित समेत गरें ।
२००५ सालमा नेपाल मा सङ्घर्ष गर्ने अठोट लिएर म सुन्दर बेल्जियम लाई छाडेर नेपाल छिरेको थिए। नयाँ अबसरको खोजी गर्नु र नयाँ काम गर्न रुचाउने मेरो स्वभाव सानैदेखि नै हो । सुरुका दिनहरुमा मैले रेडियो मा पनि काम गरे , केहि गित मा पनि आवाज दिएको छु , म लेख हरु पनि लेख्न रुचाउँ छु , सबै कुरा को अनुभव लिएर जिन्दगि जिउनु को मजै बेग्लै छ। यस ब्यबसायमा म २६ बर्ष देखि छु र यो २ दशक भन्दा लामो समय मा धेरै अवसर र चुनौती लाइ संगाल्दै यहाँ सम्म आइपुगेको छु।
कुनै दिन बेल्जियम छाडेकोमा पश्चाताप गर्नुभयो ?
मलाई कुनै पनि दिन त्यस्तो पश्चाताप भएन , किन भएन भन्नुहुन्छ भने , नेपालमा पैसा नभए पनि १ किलो चामल सापटी लिएर छाक टार्न सकिन्छ। बिदेशमा कसैले कसैलाई सहयोग गर्दैन , त्यसैले नेपालमा जीवनशैली सहज छ , जान्यो भने नेपालमा नै सहज जीवन जिउन सकिन्छ।
पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दा को अविष्मरणीय क्षण बताइदिनुहोस न ?
२०३५ सालमा टानको स्थापना भएको थियो। त्यस समयमा मैले कोशाध्यक्षको पद मा रहेर , राम्रो संग कोष लाइ सम्हालेर २ करोड लाई ७ प्रतिशत को दर मा फिक्स्ड डिपोजिट गर्न सफल भएको थिए भने ८५ लाख क्यास पैसा टान मा छाड्न सफल भएको पल म कहिले बिर्सिन सक्दिन।
अबका दिनमा तपाई का प्राथमिक एजेन्डाहरु के के रहलान ?
पहिलो एजेण्डा भनेको बिदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमणको क्रममा माउन्टेन एरियामा जाँदा अनिवार्य रुपमा सहयोगी लिएर जानुपर्ने। दोस्रो भनेको ब्यबसायी को बिचमा रहेको ट्याक्स , भ्याटमा रहेको समस्या लाई न्यूनीकरण गर्ने। र नेपालको सन्दर्भ मा कुन ट्याक्स भ्याट को अवस्था लाइ अङ्गीकार गर्न सकिन्छ त्यसमा मेरो पहल रहनेछ। तेस्रो भनेको नेपालमा एडभेन्चर ट्राभल मार्ट गर्ने मेरो सोच रहेको छ , किन कि नेपाल एउटा हिमालै हिमाल को देश हो , बिश्व बजार मा नेपालको माउन्टेन को प्रचार प्रसार गर्ने मेरो लक्ष्य छ। चौथो नम्बर मा छ , पूर्वज हरुले पहिचान गरेको ट्रेकिंग डेस्टिनेसनहरुलाई प्रचारप्रसार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मा पनि नयाँ ट्रेकिंग डेस्टिनेसनको मार्केटिंग गर्ने लक्ष्य मैले लिएको छु। नम्बर पांच मा सम्पूर्ण ब्यबसायी लाइ अहिलेको आइटी ,कन्टेन्ट, ब्लग ,बिभिन्न नयाँ टेक्नोलोजी को विकास गरेर सम्पूर्ण ट्रेकिंग एजेन्सीको सक्षमता वृद्धि गर्ने मेरो लक्ष्य रहेको छ।
टिम्स रकम को बारेमा केहि बताई दिनुहोस न ?
टिम्स को रकम लाइ पनि मैले एस र नो गर्नेछु। अब को ६ महिना भित्रमा टिम्स को टुंगो लाग्नेछ। यदि ब्यबसायी र मजदुर को हकहित मा टिम्स छ भने , राम्रो संग काम गर्न नेपाल सरकार संग आग्रह गर्नेछु ,तर टिम्स ब्यबसायी को हकहित को लागि छैन भने टिम्स लाई खारेज गरेर नयाँ ढंग बाट ट्रेकिंग परमिट लागु गर्नुपर्छ भन्ने मुल्य मान्यताका साथ म अघि बढ्ने छु।
भिजिट नेपाल २०२० सफल पार्न टान ले कस्तो भूमिका खेल्छ ?
भिजिट नेपाल २०२० सफल पार्न टानले दाहिने हात भएर सहयोग गर्नेछ। पर्यटन मन्त्रि योगेश भट्टराई लाई हामि नजिकै बसेर सहयोग गर्नेछौं। र भिजिट इयर को क्याम्पेनियरलाई पनि हामी एकदमै सहयोग गर्ने छौं। भिजिट इयर मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य लाइ टान ले साथ र सहयोग गरेर टार्गेट गरेको भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन मद्दत गर्नेछ ।
टान नबिकरण नभई नै निर्वाचन मा गएको हो ?
टान नबिकरणको प्रोसेसमा छ , चाडैं नै नबिकरण पनि हुन्छ।
टानको फ्लाइट कतिको सुरक्षित भएर उड्ला त ?
पर्यटन क्षेत्र को २६ बर्षे लामो अनुभवमा ,म हिजो को दिन मा फ़्लाइङ्ग क्रु थिए। आज म क्याप्टेन बन्ने कोसिस गर्दैछु, बन्दैछु । आगामी दिनमा जसरि फ्लाईट एक गन्तब्य बाट अर्को गन्तब्य मा सेफ्ली ल्याण्ड गर्दछ त्यसरी नै म टान को अध्यक्ष को हिसाब ले केहि न केहि को रुपमा बेटर टान ,पर्यटन ब्यबसायी हरुको बेटर भविष्य बनाउने छु , र आफ्नो २ बर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेर जाँदा कसैको आँखामा नबिझाउने गरि बिदा हुनेछु। त्यस समय अवधिमा पर्यटन ब्यबसायी को मर्म , भावना को कदर गरेर काम गर्नेछु र आफ्नो कार्यकाल को फ्लाइट सेफ्ली ल्याण्ड गर्नेछु।